Hamehana ara-pahasalamana: Nandray fepetra maro ny JIRAMA | JIRAMA
Hamehana ara-pahasalamana: Nandray fepetra maro ny JIRAMA
Isan’ireo orinasa manatanteraka ny asa fanaony andavanandro ny JIRAMA amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Maro ireo fepetra noraisiny hahafahana manatanteraka ny asa ary koa hitsinjovana ny mpiasa.
Amin’ny maha sampan-draharaham-panjakana, antsoina miasa noho ny filana azy, ny JIRAMA dia nandray fepetra maro hahafahany miatrika ny fahamehana ara-pahasalamana, ka isan’izany ny fampitomboana isa ireo ekipa manao « dépannage » izay miasa andro aman’alina.
Araka izany dia entanina ny mpanjifa hampandre ny JIRAMA amin’ny alalan’ny laharana tokana 3547 ho an’Antananarivo na handefa hafatra miafina amin’ny pejy fesiboky JIRAMA Ofisialy raha vao misy tranga fahatapahan’ny herinaratra na voina mba hahafahana manafaingana ny fanarenana.
Mikasika ny mpiasa kosa indray dia nomena azy ireo ny fiarovana samihafa hahafahany manatanteraka ny asany sy mitsinjo ihany koa ny mpanjifa mifanerasera amin’izy ireo.